Faah Faahin Ka Soo Baxeysa Qaraxii Ka Dhacay Muqdisho + Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa faah faahin dheeraad ah ay ka soo baxeysaa Qarax gaari loo adeegsaday oo galabta ka dhacay Isgoyska Soobe gaar ahaan Afaafka hore ee Hoteel Safaari ee Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Gaariga Qarxay ayaa waxaa laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa iyadoona uu ku Qarxay Afaafka Hore ee hoteelka.
Gaariga Qaraxa loo adeegsaday ayaa ahaa Gaariweyn oo xamuul ah.
Dhismayaashii ka Agdhawaa goobta uu Qaraxa ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan, Hoteeladii iyo Guriyihii ka Agdhawaa goobta.
Qaraxii galabta Muqdisho ka dhacay ayaa waxaa ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana dadka waxyeelada soo gaartay ay u badan yihiin dad goobta marayay xilligii uu Qaraxa uu dhacayay.
Gaadiidka gurmadka deg dega ah ee Ambalaasta ayaa goobta gaaray iyagoona halkaasi ay ka qaadaan dadkii ku waxyeelobay Qaraxa.
Ciidamada amaanka dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay gaareen goobta uu Qaraxa ka dhacay, si ay u xaqiijiyaan ammaanka guud ee goobta uu Qaraxa ka dhacay.
Qaraxii galabta ka dhacay Isgoyska Soobe gaar ahaan Afaafka hore ee Hoteel Safaari ayaa waxaa lagu tilmaayay inuu ka mid yahay Qaraxyadii ugu xooganaa ee ka dhaca wadada aadka u mashquulka badan ee Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya .